रणवीर र दीपिकाको विवाह पक्का ! « Ramailo छ
रणवीर र दीपिकाको विवाह पक्का !
प्रेममा रहेका रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण विवाहको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । अन्तत: उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । बलिउडको नम्बर १ यो जोडी यहिँ वर्ष नोभेम्वर २० तारिखमा विवाह बन्धनमा बाँधिने छ ।
इटालीमा हुने विवाहमा यी दुईका निकट र आफन्तसहित जम्मा ३० जनाजति सहभागी हुने बताइएको छ । स्रोतको अनुसार इटाली दीपिकाको निकै मनपर्ने ठाँउ हो । त्यसैले उनले ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’का रूपमा इटाली नै रोजेकी हुन् ।
बिहे गरेर फर्केपछि दुवैले आफन्त र साथीहरूलाई मुम्बईमा र दीपिकाको जन्मस्थान ब्याङलोरमा ग्राण्ड रिसेप्सन दिने योजनामा रहेको खुलाइएको छ ।
उनीहरु र पारिवारिक पक्षबाट विवाहको बारेमा आधिकारिक जानकारी बाहिरिएको छैन । तर, कबिर बेदीले सामाजिक संजालबाट यी दुईको विवाह तय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘दीपवीर’ नामबाट दर्शकमाँझ चिनिएको यो जोडीले ‘रामलीला’, ‘बाजिराव मस्तानी’ र ‘पद्मावतल’गायत फिल्ममा एकैसाथ काम गरेका छन् । यी दुईका फ्यान अहिले विवाहको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । केहि समय अगाडी यो जोडी विदा मनाउन भारत बाहिर गएको थियो । फर्कदा विमानस्थलमा किस गरेको फोटो सार्वजनिक भएपछि दुवैजना चर्चामा आएका थिए ।